URafael Alberti, iminyaka eli-19 ngaphandle kwembongi yolwandle. Iivesi kwimemori yakhe | Uncwadi lwangoku
Ziyazaliseka namhlanje Iminyaka eli-19 emva kokufa yenye yeembongi ezinkulu zaseSpain, URafael Alberti. Ngo-Okthobha i-28, i-1999, le mbongi kunye nomlobi wemidlalo bashiye iingxoxo, ilungu le-Generation ye-27. Wayethathwa njengomnye wababhali abamele oko kwaziwa ngokuba yiSilver Age kuncwadi lwaseSpain kwinkulungwane yokuqala yesithathu yenkulungwane yama-XNUMX. Namhlanje Ndiyibalaselisa le mibongo mine ukukhumbula.
1 URafael Alberti
2.1 Endikushiyele kona
2.2 KuGarcilaso de la Vega
2.4 Ingelosi elungileyo
IAlberti wazalelwa e-El Puerto de Santa María Nge-16 kaDisemba ngo-1902 wasweleka kwakweso sixeko. Ngo-15 waya ku Madrid ndahlala apho ukusukela ngoko. Nini utata wakhe wasweleka ngo-1920, into eyayimakisha ngokukodwa, waqala ukubhala imibongo. Kwaye ngelixa wayezifumanisa njengembongi wadibana nayo yonke isizukulwana yabantu abancinci abaqaqambe njengaye oya kwenza enye yezona ndawo zimeleyo kunye nefuthe kuyo yonke iSpanish yenkulungwane ye-XNUMX. Ngaba ifayile ye- ye27 kwaye phakathi kwabo babe UFederico García Lorca, uPedro Salinas okanye uVicente Aleixandre.
Xa ifayile ye- Udabi lasekuhlaleni zibekwe ngokwembono ngokubambisana kweAntifascist Intellectuals. Emva kwembambano, waya ekuthinjweni kwaye wayehlala kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, ukusuka eParis ukuya eBuenos Aires.
Malunga nomsebenzi wakhe, Wayengumbhali woluhlu olude lokuqokelela imibongo, kubandakanya nokwazana kwakhe Ukuhamba ngenqanawa, ngubani ophumelele Imbasa yeeMbongo zeSizwe, Isiporho siyayihlasela iYurophu, Ncuma iTshayina, Kwiingelosi o Iingoma zeAltair.
Ndashiya amahlathi am ngenxa yakho, ukulahleka kwam
i-grove, izinja zam ezingalaliyo,
ikomkhulu lam lithinjiwe
kude kube phantse ubusika bobomi.
Ndishiye ukungcangcazela, ndashiya ukushukuma,
Ndishiye isithunzi sam ndinxunguphele
ukuphuma kwegazi lokwahlukana.
Ndashiya amahobe alusizi ngasemlanjeni
amahashe elangeni lentlabathi,
Ndayeka ukunuka ulwandle, ndayeka ukukubona.
Ndishiye yonke into eyeyam ndenzela wena.
Ndinike wena, iRoma, ngenxa yeentsizi zam,
kangangoko bendikushiye ndinayo.
KuGarcilaso de la Vega
… Ngaphambi kwexesha kunye phantse neentyatyambo ezisikiweyo.
IGE DE LA V.
Ngewuyibonile ukukhala kwe-ivy xa awona manzi alusizi achitha ubusuku bonke ejonge umnqwazi osele ungenamphefumlo,
kwisigcina-ntloko esifa kwirosi ezelwe enkungwini elele izibuko zeenqaba
Ngelo lixa xa eyona tuberose yomileyo ikhumbula ubomi babo xa bebona ii-violets ezifileyo zishiya iibhokisi zazo
kwaye iilute zarhaxwa ngokuzinyathela.
Kuyinyani ukuba imingxunya iyile iphupha kunye neziporho.
Andazi ukuba esi sikrweqe sokuhamba singenanto sijonga ntoni kwiinqaba.
Zikhona njani izibane ezikhawulezisa ngokukhawuleza ukuba buhlungu kwamakrele
ukuba ucinga ukuba inyibiba igcinwe ngamagqabi ahlala ixesha elide?
Ukuphila okuncinci nokulila ikamva lekhephu eliyiphosileyo indlela yalo.
Emazantsi intaka ebandayo ihlala isikwa phantse ngentyatyambo.
Ndiza kuhamba ngomkhombe, kusasa, ndisuke ePort,
ukuya ePalos de Moguer,
kwisikhephe ngaphandle kwamaphini okubhexa.
Ebusuku, ndedwa, ukuya elwandle!
kunye nomoya kunye nawe!
Ngeendevu zakho ezimnyama wena,
Lowo bendimfuna weza
Ayinguye lowo utshayela isibhakabhaka ngaphandle kokuzikhusela.
iinkwenkwezi ezingenazo izindlu,
iinyanga ngaphandle kwelizwe,
Ikhephu lokuwa kwesandla,
Ayinguye lowo unwele lwakhe
Ngaphandle kokukrwempa umoya,
ngaphandle kokulimaza amagqabi okanye iikristali ezihambayo.
Lowo kwizinwele zakhe
bemba unxweme lokukhanya okuswiti esifubeni sam
kwaye wenze umphefumlo wam uhambe.
Ulwandle. Ulwandle kuphela!
Kutheni undizisile tata
Emaphupheni umbane wamaza
itsala intliziyo yam;
Bawo kutheni undizisile
Apha? Ukuncwina ukubona ulwandle,
umatiloshe omncinci emhlabeni
phakamisa esi simbonono emoyeni:
Oo blouse wam oomatiloshe;
umoya ubusoloko uyinyusa
Ukubona amanzi aphuliweyo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Imibongo » URafael Alberti, iminyaka eli-19 ngaphandle kwembongi yolwandle. Iivesi kwinkumbulo yakhe
Eduardo Mendoza: I-Biography kunye neencwadi ezilungileyo